ရေမြေခြားကြသောအခါ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ, ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged Development, Expectation, Life, strength. Bookmark the permalink.
Post-Disaster Educare →
5 thoughts on “ရေမြေခြားကြသောအခါ”
MrDBA | April 21, 2009 at 2:43 pm
MrDBA | April 21, 2009 at 2:44 pm
ရည်းစားချောချောလဲ ရတော့မယ် ဟိဟိ
ကုမ်ရာသီသူ | April 22, 2009 at 12:39 am
အဲဗျ။ Bro. ကလည်း။ Theme ကို လက်ဆော့ရင်းကနေ Image က ဘယ်နေရာမှာ ကပ်ကျန်ခဲ့မှန်း မသိလိုက်လို့ပါဂျ။ (ရရင်တော့လည်း အမြတ်ပေါ့။ 😛 )
mrsannoo | April 24, 2009 at 4:23 am
အတွေးအခေါ်ရော အရေးအသားရော မိုက်တယ်..
ကုမ်ရာသီသူ | April 25, 2009 at 5:07 am
Mr. San Oo >> နဂိုထဲက လိမ္မာတဲ့သူတော့ မဟုတ်ရှာပါဘူးခင်ဗျ။ ခုလို မြင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ။ 🙂